“Kan Eboon Isaa Dhiiga Hin Qabnetuu Arrabni Isaa Dhiiga Qaba” « QEERROO
Biyya lafaa kana irratti mootummaan gabroomsaan afaan Qawwetiin aangotti ol bahe kamuu sirna bulchiinsa ummataa (Democracy) haqaa gaggeessuun biyya bulchu keessatti fedhii fi dantaa ummataa tiksee hin beeku; tiksiisuus hin danda’u. Impaayera Itiyoophiyaa keessattis mootummoota gita bittoota habashaa dhufoo lufoo irraa ummattoota biyyattis ta’ee Ummanni Oromoo “ Tiisisa irraa Damma hin eegan’’akkuma jedhamu mirgaa uumaan qabu sarbamuu, Qe’ee fi qabeenya isaa samamee biyyarraa baqachiifamuu, gaaffii tokkoon ala jumlaan qabamee hidhamuu fi itti qiyyaafatamee adda keessa rukutamuun ajjeefamuu irraa kan hafe kabaja mirga uumamaas ta’ee faaydaan argate tokkolee hin turre; si achiis hin jiraatu.
“Utubaan hanga dhiisanii fi hanga dhiiban qaba” Ummanni Oromoo bal’aan addatti ammoo qeerroon dargaggoonni Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa FXG finiinsuun yeroon dinne didaan dina keenya of irraa fon qolchinu amma!
« SBO: Adoolessa 9 bara 2017. Oduu fi Qophiilee Haala Yeroo Irratti Fuuleffatan Garaagaraa
Radio Simbirtuu , Adoolessa 6, 2017 »